Nin yaqaana Cilmiga Falaga oo saadaaliyay xulka adkaan kara caawa Brazil iyo Argantina – Gool FM
(Brazil) 02 Luulyo 2019. Kabtanka xulka qaranka Argantina iyo kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa sameeyay bandhig aad u liita 4-tii kulan ay kasoo ciyaareen Copa America 2019.
Lionel Messi ayaa 4-tii kulan uu soo ciyaaray wuxuu ku dhaliyay kaliya 1 gool, kaaasoo xitaa ahaa mid rigoore ah, sidoo kale ma uusan sameynin ma uusan noqonin mid sameeya fursado badan sida looga bartay xiddigan inuu ka sameeyo kulamada uu ciyaarayo, wuxuuna ku guuldareystay in si buuxda uu u caawiyo saaxiibadiis xulka qaranka Argantina.
Hadaba xulka qaranka Agantina ayaa caawa saqda dhexe gaar ahaan marka ay saacada Geeska Africa tahay 03:30, waxay SuperClásico la ciyaari doonaan martigaliyaasha Copa America 2019 ee Brazil, kulankan ayaana noqon doona dagaal u dhexeeya labada dhinac si midkood loogu diiwaan galiyo kulanka finalka ee tartankan.
Hadaba Nin yaqaana Cilmiga Falaga ayaa saadaaliyay natiijada ay ku dhamaan doonto ciyaarta Brazil iyo Argantina, wuxuuna xaqiijiyay in kulankan ay guuleysan doonaan Messi iyo saaxiibadiis.
Brujito Maya oo yaqaana cilmiga falaga ayaa wuxuu ka qeyb galay barnaamijka “No Todo Pasa” ee shabakada “TyC Sports” waxaana wax laga weydiiyay kulanka caawa saqda dhexe ay wada ciyaari doona xulalka Brazil iyo Argantina wuxuuna yiri:
“Argantina waxay ku badin doontaa rigoorayaal, Brazil waxay dhibaato xoogan ka heysataa dhanka weerarka, waxaana qabaa in maalintooda aysan noqon doonin, si loo diiwaan geliyo”.
“Waxay noqon doontaa maalinta Lionel Messi”.
Copa America 2019: RIKOORRO muhiim ah oo laga diiwaan galiyay xulka Brazil, kahor kulanka ay la ciyaari doonaan Argantina